गुल्मीको इस्मामा ६० लाख खर्चेर छाप्रो, अनियमितता भएको स्थानीयको आरोप - Ekata News
एकता न्यूज / साउन ९, २०७६ - बिहिबार
इस्मा- गतवर्ष ५ नम्बर प्रदेश सरकारले गुल्मीको इश्मा गाउँपालिकामा सभाहल बनाउनका लागि ६० लाख बजेट विनीयोजन ग¥यो ।
तर भवन निर्माण स्थलको टुंगो नलाग्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र भवन निर्माण शुरु भयो । भवन अहिलेसम्म सम्पन्न भइसकेको छैन । भवन सम्पन्न नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिएकोले रकम भुक्तानी गरेपछि स्थानीयले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीयबासीले भने २२ दिनमा ६० लाखको सभाहल बनाएर गाउँपालिकाले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागाएका छन् । “असारको अन्तिममा आफ्नै ज्वाइँलाई ठेक्का दिएर २२ दिनमा ६० लाख सकिएको छ”, स्थानीय केशव सापकोटाले भने “असारको अन्तिममा त्यो पनि २२ दिनमा ६० लाखको संरचना कस्तो बनेको छ, सामान्य तरिकाले हेर्दा पनि थाहा हुन्छ ।”
तर वडाध्यक्ष सापकोटाले ठेक्कामा नभइ उपभोक्ता समितिबाट काम भएको बताए । “हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरेर समितिमार्फत काम गरेको हो,” उनले भने “समितिले एकजनालाई नियमित रेखदेखको जिम्मा दिएको हो, ठेक्का होइन ।”
स्थानीयका अनुसार उक्त सभाहल भनिएको उक्त भवनमा इटाको गारो लगाएर झ्यालढोका र जस्ताको छानामात्र लगाएर ६० लाख भुक्तानी गरिएको छ ।
“रेखदेखको जिम्मा भनिएका व्यक्ति रेखदेख हैन ठेकेदार नै हुन् र अनियमिततामा वडाध्यक्ष सापकोटाको प्रत्यक्ष संलग्नता छ”, इश्मा ५ का रेमलाल अर्यालले भने ।
सभाहल निर्माणका लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शेरबहाुदर केसीले छोटो समयमा काम सम्पन्न भएकोले अनियमितताको आरोप लगाएको बताए । फूलबारी, पेण्टिङ्ग लगायतको काम भने भुक्तानीको समयसम्म सम्पन्न नभएकोले पछि गरिएको उनले बताए ।
तर उपभोक्ता समितिले विष्णु अधिकारीलाई हेरालु भनेर भनेपनि अघोषित रुपमा ठेकेदारको काम गरेको स्थानीयको आरोप छ । त्यसमा वडाध्यक्ष सापकोटाको समेत संलग्नता छ ।
काँग्रेसले छानविन गर्ने
स्थानीयले सबै राजनीतिक दलको मिलेमतोमा अनियमितता भएकोले यस विषयमा कसैले आवाज नउठाएको आरोप लगाएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो सार्वजनिक गरेका छन् । तर नेपाली काँग्रेसका चन्द्र बहादुर महतले आफूहरुलाई गलत आरोप लगाएकोले छानविन गर्ने बताए । “अनियमितता भएर पनि प्रतिपक्षले हेरेनन् भन्ने आरोप हामीलाई पनि छ । तथ्य खोज्दै छौँ,” उनले भने ।
उनले सिलिङ्ग नराखेको जस्ताको छाना, ग्रिल नराखेको झ्याल सहितको सामान्य ट्रस मात्र बनेको देखेको भएपनि अनियमितता भए नभएको भनेर त्यतिकै भन्न नसकिने बताए ।
“६० लाख बजेटमा मदाने गाउँपालिकामा ठूलो पक्की संरचना सहितको सभाहल, बाउण्ड्री र राम्रो फर्निसिङ्ग समेत छ, तर हाम्रोमा त्यति नै रकममा सामान्य ट्रस देखिएकोले केही कमजोरी छ कि भन्ने जनताको आरोप हुनसक्छ”, उनले भने “हामीलाई पनि आरोप लागेकोले हामी छानविन गर्छौँ र सत्यतथ्य पत्ता लगाउँछौँ ।”
गाउँपालिका केन्द्र टुंगो नलाग्दा समस्या
यो समस्या समयमै गाउँपालिका केन्द्र निर्धारण नहुँदा उत्पन्न भएको हो । स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगले तोकेको केन्द्र पनि नमान्ने र नयाँ केन्द्र पनि निर्धारण गर्न नसकेपछि इश्मामा विकास निर्माणका धेरे काम प्रभावित भएका छन् ।
आयोगले गाउँपालिका केन्द्र वडा नं. ५ को चापटारीमा तोकेको थियो । तर शुरुमै वडा नं. ५ को मैदानमा लगेर कार्यालयस्थापना गरियो । वडा नं. २ र ६का सबै जनता, वडा नं. ६ का जनताले पहुँचको भरमा केन्द्र सारेको आरोप लगाएका छन भने गाउँपालिकाका पदाधिकारीले कार्यालय राख्ने भवनहरु नभएको कारण मैदानबाट काम चलाएको बताएका छन् ।
समयमै केन्द्र नतोकिँदा स्थापना भएको तीन वर्षसम्म गाउँपालिकाका कार्यालय भवनहरु बन्ने टुंगो छैन । बनेका संरचनाहरुमा समेत विवाद भएको छ । विवादकै कारण समयमै विकासका काम गर्न नपाउँदा गुणस्तरीय बन्न नसकेको र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष तोयानाथ सापकोटाले बताए । “प्रदेशको शसर्त अनुदानबाट भवन बनाउने विषयमा विवाद भएपछि ढिला शुरु भयो”, उनले भने “अहिले भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नु परेको छ ।”